कृषि विकास बैंक ह्याकिङ प्रकरणमा आतंकवादीको संलग्नता भएको भारतको खुलासा – Agrimpost
मुख्य पृष्ठअटो अर्थ/बाणिज्य पत्रपत्रिकाकृषि विकास बैंक ह्याकिङ प्रकरणमा आतंकवादीको संलग्नता भएको भारतको खुलासा
काठमाडौं : कृषि विकास बैंकको लाहान शाखाको सिष्टम ह्याक गरी चार करोड ७३ लाख झिकिएको घटनामा नेपाल प्रहरीले भारतीय नागरिक मोमताज मियाँलाई खोजिरहेको छ। तिनै मियाँलाई भारतको उत्तर प्रदेश प्रहरीले पनि खोजी रहेको रहस्य खुलेको छ। भारतीय प्रहरीले मियाँलाई भारतमा आतंकवादी सञ्जालका लागि पैसा ल्याएको आरोपमा खोजेको हो।
उत्तर प्रदेश प्रहरीले गत आइतबार चारजनालाई एक लाख ३५ हजार नेपाली र चार लाख ७५ हजार भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको थियो। रकमबारे स्रोत खोज्दा पक्राउ परेका चारैजनाले मियाँले नै आफूहरूलाई दिएको बयान दिएका छन्। नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेका १७ मध्ये मियाँलाई कैलालीका चन्द्रबहादुर बुढा र विजय साहले २० लाख रुपैयाँ दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तत्कालीन समयमा बुढाको खातामा ५९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिए पनि १० लाख रुपैयाँ मात्रै उनले झिकेका थिए।
नवभारत टाइम्सले मंगलबार भारतीय गृह मन्त्रालय र उत्तर प्रदेश प्रहरीका डीजीपी ओपी सिंहलाई उदृत गर्दै पक्राउ परेका चारजनाले मियाँले नै पैसा दिएको बयान दिएको समाचार प्रकाशन गरेका छन्। उत्तर प्रदेश प्रहरीले उमेद अलीलाई दुई लाख, सञ्जय अग्रवालसँग एक लाख ४५ हजार नेपाली, समिर सलमानीसँग एक लाख ५० हजार भारु, एराज अलीसँग एक लाख २५ हजार भारतीय रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको नवभारतले लेखेको छ।
टाइम्ससँग डीजीपी सिंहले भनेका छन्, ‘नेपाली बैंकको खातामा यो रकम कसरी आयो ? त्यसको स्रोत के हो ? नेपालमा कसको सम्बन्ध छ ? त्यो रकमबाट कस्तो आतंकवादी गतिविधि हुन्थ्यो र त्यसबाट कस्तो फाइदा हुन्छ ? यसको खोजी हुन्छ।’ समाचारमा नेपाली बैंकमा अन्यत्रबाट आएको पैसा भारत पठाउन पाकिस्तानी नागरिकको समेत हात रहेको आशंका गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले यो घटना केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलेसमेत अनुसन्धान गरिरहेको बताए। ब्युरोका एसएसपी रामदत्त जोशीले भारतीय प्रहरीले दाबी गरेजस्तो हो वा होइन भन्नेमा अनुसन्धान गर्ने बताए। उनले भने, ‘सत्य के हो हामी अनुसन्धान गरी निर्क्यौल पुग्छौं।’ नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कृषि विकास ह्याकिङ प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। १७ जना पक्राउ परेको यो घटनामा पिटर कालेको समेत खोजी गरेको छ। पिटरले नै फिसिङमार्फत नेपाली परिचालित गरी कृषि विकास बैंकको रकम निकालेको महाशाखाको दाबी छ। पक्राउ परेका केही अभियुक्तहरूले पिटरको संलग्नताबारे खुलाएका थिए। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छ